1 desambra 2016: olona 535 ireo voaisa mitondra ny tsimok’aretina VIH SIDA eto Mahajanga | Région Boeny
Nanamarika ny 01 desambra, Andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny tsimok’aretina VIH SIDA ny teto Boeny tamin’ny alàlan’ny fitiliana rà faobe maimaim-poana mandritra ny roa andro ao amin’ny CHU Mahavoky Atsimo, CSI (Centre de Soins Intégré) Mahabibo ary eny amin’ny CSB Tanambao Sotema.
Ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar niaraka tamin’ireo talem-paritra isan-tsokajiny, no nisantatra ny fitiliana rà tao amin’ny tobi-pitsaboana CSI Mahabibo, ka nanentanany ny vahoaka rehetra hanao toa azy ireo satria isika rehetra dia samy tompon’andrikitra amin’ny fisorohana ny VIH SIDA, araka ny teny filamatra hoe Vonona aho hisoroka ny VIH, hoy izy.
Ho fanajana ny Zon’olombelona kosa dia nampita hafatra ny Lehiben’ny Faritra, ny amin’ny tsy tokony hanilikilihina ireo mpifanambady lahy samy lahy na vavy samy vavy, na amin’ny toeram-piasana izany na eny anivon’ny fiaraha-monina.
Fantatra nandritra ity fotoana ity fa efa mahatratra 535 ny olona voiasa mitondra ny tsimok’aretina VIH SIDA eto Mahajanga hatramin’ny septambra 2016. Ny 357 amin’izy ireo no tena efa marary, ary atahorana noho izy ireo tsy mifantoka amin’ny fitsaboanana. 15 hatramin’ny 49 taona eo ny salan-taonan’izy ireo ary eto an-tampon-tanànan’I Mahajanga ny ankamaroany.